Mmetụta Genshin na-echere gị site na ụwa mepere emepe MMO | Gam akporosis
6,63GB nke nnukwu nkwado na ntanetị a na-akpọ Genshin Impact a la Zelda: Ume nke Ikuku
Ka anyi bido ike: Mmetụta Genshin bụ ihe nkwado dị n'ịntanetị ọhụrụ a la Zelda: Ume nke Ikuku na ihe magburu onwe visual ịke na a usoro nke oru nkà na-eduga gị na-atụghị anya ọgụ.
Ọ bụ anyị na-ekwu maka otu ntanetị dum nke ọkụ ọkụ ga-agba n'ụzọ nkịtị ihe niile gbara gị gburugburu, nke mere na ọ nwere ọbụna obere mmetụta ma ọ bụrụ na onye iro na-asa ahụ na mmiri ma nwee ike ichebe onwe ha pụọ ​​na anwansi gị. Egwuregwu ụwa na-emeghe oge-oge nke gburugburu ebe obibi "na-eje ozi" ihe, ka anyị bịakwute ya!
1 Nkọwa nkọwa na 6,65GB na-emekwa
2 Insmụ ejima abụọ abata ụwa nke Genshin Impact
3 Crossplatform na ụda olu pụrụ iche
Nkọwa nkọwa na 6,65GB na-emekwa
Mgbe ịmalitere egwu Genshin, ị na-alụ ọgụ megide onye iro mbụ gị, ị na-ejide bọtịnụ ọgụ nke otu ikike gị, avatar gị malitere mee ihe ojoo ruo mgbe a ga-ewepụta okwu dị ike ma hụ otu esi agbapụ onye iro n’ebe dị anya, ị malitere iche na ị naghị eche egwuregwu ọbụla ihu; na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka egwuregwu mkpanaka.
Ọ bụrụ na anyị ga-emecha bụrụ tupu egwuregwu dị arọ 6,65GB nakwa na ị ga-ebudata, anyị anaghị eche onye ọ bụla ihu. Ọbụna eserese ahụ nwere mmetụta dị ukwuu nke na mgbe ị na-agafe ntinye cinematic na egwuregwu ahụ, ị ​​ga-ahụ etu avatar gị si echere onwe gị iji bulie ihuenyo ahụ mgbe ị matara na ị na-egwu egwu. Control na-achịkwa ya, ndị eserese ahụ bụkwa otu. Eziokwu bu, olee otu ihe siri puta iche n'echiche a.
Ya mere ị bido ịkwọ aka gị makana ị nwere ike ịchọta MMORPG a la Zelda: Ume nke Anụ ọhịa ebe ụwa mepere emepe na-echere gị ịmalite ihe kachasị mma na ndị ọrụ ibe gị; ah, na gịnị kpatara na ị gaghị akụ egwuregwu anyị nke ọnwa Septemba nakwa na n'ọkwa a na-ahụ anya na nke teknụzụ, ọ bụ ezie na n'ihu ụdị ọzọ, ọ na-agbajikwa ya.
Insmụ ejima abụọ abata ụwa nke Genshin Impact
Ọ bụrụ na anyị ekwuola banyere etu usoro ọgụ ahụ siri dị ukwuu, anyị enyela ngosipụta maka ihe ọ bụ, ebe ọ bụ na anyị nwere usoro nke ihe anyị ga - ejide: Anemo, Electro, Hydro, Pyro, Cryo, Dendro na Geo. Ha niile metụtara electro, oyi ma ọ bụ ọbụna ọkụ.
Nke a bụ ebe ekwenye Ọnọdụ-abanye nke mere na ndị ọzọ egwuregwu ị nwere ike ijikọta ha ma mepụta mmetụta ndị dị ike karị iji belata ndị isi ikpeazụ na ndị ọzọ. Ọ bụ akụkụ a nke MMORPG ọhụrụ a na ụwa mepere emepe ebe ọ na-eduga anyị ka anyị nwee ọ inụ na mkpakọrịta.
Estamos na-ekwu na ụwa na-aga n'ihu ma ọ bụghị ogbenye na nkọwa, ma ị nwere ugwu, osimiri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. A ga-enyocha ihe ndị a maka ọdịdị ala ha ka ha wee nwee ike ịrịgo, yabụ enweghị ihe ọ bụla kọrọ na egwuregwu iji chọpụta ma anyị na-eme mkparịta ụka maka ihe ọ bụla ọ na-enye.
Crossplatform na ụda olu pụrụ iche
Mmetụta Genshin na-enye anyị ya ike igwu egwu site na ikpo okwu dị iche iche, yabụ ị ga - ahụ ndị egwuregwu ndị ọzọ sitere na njikwa ma ọ bụ PC. Onye ọ bụla na-enwe a egwuregwu nke anyị nwere ike na-eto ya oké soundtrack rụrụ site London Philharmonic Orchestra na Shanghai Symphony Azam. Ma ọ bụ na anyị enweghị ike ịhapụ ndị otu ahụ na ọkwa ahụ iji nwee ike ihu ụdị anụ ọhịa niile.
Un MMORPG nke bụ ode na visual iji hapụ anyị ụjọ eji asusu ahuru anya a la manga. Uwa zuru oke zuru ụwa ọnụ, mmegharị eserese zuru oke na palette agba na-echetara anyị egwuregwu Nintendo. Ọ dị na Spanish, yabụ na anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla ịmara akụkọ ahụ na mkpụrụ edemede ndị ahụ ga-agabiga n'ihu anyị dị ka a ga - asị na anyị na - ebi akụkọ nke anyị. Anyị nwere ike ịga n'ihu na-ekwu maka ịtụnanya ọ bụ, mana anyị na-ahapụ ndị nke ọzọ ka ịnwale nke gị.
Mmetụta Genshin na-abịa gam akporo ya na ntinye nke 6,63GB na ike na draịva iji ghọọ otu n'ime MMORPGs nke afọ. Ihe niile na-agbapụta na ya ọ ga-abụ ihe gbasara ịmara ọdịnaya ya mgbe anyị nwere ọkwa dị elu iji hụ ma ọ ga-enwe ike ijigide ndị egwuregwu ahụ. Ha niile ga - abụ ịgbakwunye ọdịnaya ọhụrụ na mmelite.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ MMORPG dị elu iji nọrọ ọtụtụ awa, ugbu a ka ịchọtala ya.
Usoro edemede: 7,7
N'anya ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ
Ọnọdụ doro anya na ụwa na-emepe emepe
Nhazi nke ihe odide na ihe omuma ha bu ihe omimi
Ọgụ dị ezigbo ụtọ na ịkọ ọgwụ na gburugburu ebe obibi
N'ihe ngosi nke ihe odide na okwu ojoo di anya
Nke a na Spanish
Nke ahụ enweghị olu n'asụsụ Spanish
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » 6,63GB nke nnukwu nkwado na ntanetị a na-akpọ Genshin Impact a la Zelda: Ume nke Ikuku
Jiri ohere HUAWEI mee ihe na-enweghị VAT ndị adịlarị !!
NewPipe na-agba mbọ ihu ọhụụ ka ọ dị ka ahụmịhe YouTube